Akanjo mahazatra an'i Brezila, inona ny akanjon'ny Breziliana? | Vaovao momba ny dia
Akanjo mahazatra avy any Brezila
Mariela Carril | | America, Brasil, kolontsaina, Toerana fitsangatsanganana
Fantatrao ve ny akanjo mahazatra avy any Brezila? Alohan'ny hahalalana azy dia mora ny mahafantatra fa ny firenena dia zavaboary maoderina ary amin'ny fananganana azy ireo lafiny samihafa amin'ny fiainana sy ny kolontsain'ny olona monina amin'ny faritaniny dia zava-dehibe: ny fiteny na fiteny, maritrano, fomba amam-panao ary akanjo na akanjo mahazatra, ohatra.
Azontsika atao ny miresaka firenena iray sy akanjo mahazatra maromaro araky ny faritra, sokajin-tsosialy na foko raha toa ka firenena maro foko izy io. Toerana isan-karazany izao tontolo izao ary firenena maro dia tontolo kely ho azy ireo. Any Amerika atsimo, ohatra, dia any Brezila, tena goavambe. Inona no akanjo Breziliana mahazatra indrindra?
2 Akanjo Breziliana mahazatra
Brezila dia firenena midadasika izay mibodo ny ampahany tsara amin'ny faritanin'i Amerika atsimo ary ny tampony dia rakotra ampahany lehibe amin'ny ala iray manintona sy manankarena indrindra eran'izao tontolo izao, Amazon.
Brasil es tanin'ny vazimba teratany ary tamin'ny taonjato faha-XNUMX vao tonga ny eropeana, Ny Portiogey. Noho ny Fifanarahana tany Tordesillas, nitafa tamin'ny fanjakan'i Portugal ny tany ary nanomboka nanjanaka ireo vazimba teratany roa tapitrisa novinavinaina tamin'izany fotoana izany. Misy foko maromaro izay hifangaro amin'ny Portiogey amin'ny farany, mba hisian'ny fifangaroana foko vaovao amin'ny fahatongavan'ireo andevo mainty avy any Afrika.
Ny tompon-tany tsirairay avy dia samy nanana ny fombany, ny tantarany, ny fiteniny, ary avy amin'ireo syncretism mahazatra nitranga tany Amerika, dia teraka ny fomba amam-panao Breziliana ankehitriny, ary mazava ho azy, ny fitafiana breziliana mahazatra samy hafa izay afaka jerena manerana ny firenena.
Akanjo Breziliana mahazatra
Ny fitafiana mahazatra dia miorim-paka any Eropa satria ny Indiana tsy nandeha zipo na pataloha. Naharitra 300 taona mahery ny vanim-potoana fanjanahantany teto ny dian-tanan'ny Portiogey sy Eoropeana amin'ny akanjo amin'ny ankapobeny dia matanjaka be. Ny vazimba teratany izay nampidirina amina fiarahamonina mpanjanaka, ary ny mainty hoditra, dia mampifanaraka ny fampiasana sy ny fomban'ny tompony eropeana rehefa miakanjo.
Ny akanjo mahazatra an'i Brezila dia miova arakaraka ny faritra ao amin'ny firenena ary afaka manao fizarazaran-kevitra haingana sy tsy ara-potoana izay manome santionany amin'ity karazany ity isika, nefa tsy ho feno: Salvador de Bahía, Rio de Janeiro, Amazonas, Pernambuco ary Paraíba ary Rio Grande do Sul. Amin'ity tranga farany ity dia manana akanjo breziliana mahazatra miverimberina any amin'ny firenena mifanila aminy toa an'i Uruguay sy Arzantina isika: akanjo lehilahy ambanivohitra, panty ary akanjo fotsy.
Ny panty dia tsy inona fa ny pataloha malalaka sy malalaka, izay nampiasain'ny lehilahy ambanivohitra hatrany, satria mahazo mitaingina izy ireo. Ampiasaina amin'ny pataloha ny lobaka, ny ponchos, baoty vita amin'ny hoditra misy satroka sy satroka mololo. Ny pataloha dia mitazona kofehy vita amin'ny hoditra na volon'ondry, angamba misy haingo.
Amin'izay tranga izay ny akanjo Breziliana mahazatra an'ny Pernambuco sy Paraíba, fanjakana roa any Brezila, akanjo miloko izy ireo izay matetika hita amin'ny fety sy fankalazana olo-masina: akanjo lava ho azy ireo, misy andilana voamarika ary satroka malalaka, palitao turtleneck sy baoty, mety ho akanjo misy fanontana voninkazo sy loko io, izay manampy dantelina sy ruffles ary satroka voaravaka.
Amin'izay tranga izay amin'ny lehilahy, manao pataloha tery izy ireo, lobaka misy fehy (mety misy ravina ny lobaka), fehin-kibo, palitao lava mandohalika misy bokotra telo, satroka mololo sy baoty. Tsy mafana ve ny akanjo mavesatra be loatra? Eny, saingy tsarovy fa ny niandohan'ireny fety ireny dia tsy tany Amerika fa any Eropa ary ny fizaran-taona dia mandeha amin'ny làlana diso foana.
Ny iray amin'ireo akanjo mahazatra any Brezila izay fantatry ny olona haingana kokoa dia ny an'ny ny vehivavy ao San Salvador de Bahia, the Bahianas. Milaza izy ireo fa fivavahana syncretistic antsoina hoe camdomblé ary miakanjo izy ireo miaraka amin'ny zipo lava midadasika, blouse voaravaka tanana ary firavaka toy ny rojo sy kavina. Raha ny marina, ity fivavahana ity dia lazaina amin'ny faritra maro any Brezila ary ny akanjo dia mety miovaova kely amin'ny lafiny iray, fa amin'ny ankapobeny dia io no iraisana.
Izy io dia karazan'akanjo ampiasaina isan'andro fa ho an'ny fety ara-pinoana dia misongadina kokoa ary avy eo manova ny landy tsotra sy azo ampiharina ho an'ny chintz, dantelina na muslin. Con fotsy beeny, kely ny loko. Ny fehikibo dia ampidirina amin'ny haavon'ny tratra izay miasa ho toy ny kibo na bra ary satroka, ny fahitana ny morontsiraka, izay tsy inona fa ny lamba mihazona mafy. Ny sefo na ny vehivavy manana ny ambaratongam-pahefana avo indrindra ao amin'ny tempoly, dia miavaka amin'ny ambiny satria manao palitao na akanjo ambonin'ilay akanjo sy turban lehibe kokoa sy manaitra kokoa izy.
Ary ahoana ny akanjo mahazatra Rio? Misy ve? Eny, mihoatra na latsaka. Akanjo mahazatra Breziliana ve ny fitafian'ny mpandihy samba? Amin'ny heviny hoe izy io dia fantatra ho akanjo Breziliana, mety izany. Amin'ny antropolojika iray hafa, manana ahiahy aho. Fa tsara, fa misy mpandihy samba manana bikini kely sy miloko.
Toy ny amin'ny float Carnival no manombatombana ny akanjo, dia velona ireo bikini ireo miaraka amin'ny vato, volom-borona ary glitters. Tsy misy mahita an-dalambe, mazava ho azy. Saingy ny karnavaly ao Rio dia fety malaza tahaka ny fety candomblé any Bahia.
Farany, raha mankany isika Amazon Azontsika atao ny miresaka momba ny akanjo fanaon'ireo vazimba teratany saingy mila manao fahasamihafana kely eo amin'ny foko isika ary mety ho sarotra izany. Ny mponina tany am-boalohany tany amin'ny faritra Amazon dia niboridana mandra-pahatongan'ny Eoropeana ary rehefa nanomboka nitafy izy ireo dia nanao izany manaraka ny lamin'ny fampiononana fa tsy ny fanaon'ny Eropa.
Misy tontolo iray manontolo an'ny firavaka, fehin-tànana, bangle, zavatra ho an'ny volo, manavaka ny foko iray amin'ny iray hafa, ary koa amin'ny fety ara-pivavahana dia ankalazaina izy ireo akanjo vitsivitsy vita amin'ny rantsana, hodi-kazo na kofehy voajanahary izay mahazo loko miaraka amin'ny inks legioma. Notarihin'ny fahaiza-miasa, maro amin'ireo akanjo mahazatra no manarona ny taovam-pananahana sy ireo faritra marefo indrindra amin'ny vatan'olombelona.
Mazava ho azy tsy ireo ihany no akanjo mahazatra avy any Brezila. Raha tsy mahita fifaninanana hatsaran-tarehy hahitana hoe iza no vehivavy tsara tarehy indrindra any Brezila, dia ho tsapanao fa lehibe ny firenena ary rehefa miresaka momba ny akanjo manao akanjo mahazatra dia maro hafa. Saingy amin'ny santionany dia mendrika ny bokotra iray ary anay ity lisitra ity.
Akanjo breziliana inona no anaovanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Brasil » Akanjo mahazatra avy any Brezila
Toerana voajanahary 7 any Eropa tsy tokony hotadidina
Aberdeen, perla any Ekosy